Wonke umuntu ufuna iholide isikhathi uphezu kahle ngangokunokwenzeka, izinsuku eziningi kangaka ujabule, esikhathini eside ngaphambi kokuba ukuzama ukucabanga futhi sihlele konke ngokucophelela, ngakho akudingeki ukuba sikhathazeke ngalutho. Labo abahamba ukuvakashela edolobheni Zhukovsky (noma imuphi omunye umuzi), ukwazi kusengaphambili yonke izinto ezithakazelisayo, uphawu umzila yokuvakasha kwazo noma ngifuna amathuba ukuya hambo ke. Yini sibona Zhukovsky?
The main ezikhangayo - izakhiwo zenkolo, abasinde izenzakalo eziphawulekayo. Bobabili emzini futhi ezizungezile ungavakashela wezindela abadumile - okusha Solovetsky Marchugovskuyu ezingwadule Ugresha Monastery.
ukubukeka Elegant lamasonto amakhulu Orthodox, ukuthulisa Izindlwana encane, ngomlando wabo owehlukile - akukho lutho umangale zibabaza lokho. Ayikho ezikhangayo kancane ezithakazelisayo ukuthi angaletha edolobheni Zhukovsky - amasayithi nontraditional zenkolo: izakhiwo zenkolo zasendulo, ngokwesiko nakwezinye izindawo ezikhethekile.
yobuciko Architectural, okuyinto badalwa iqhaza onjiniyela ezivelele kanye abaklami izikhumbuzo izinto engavamile, esiyingqayizivele Museum izakhiwo, embukisweni ukubaza, iindawo ezimazombe lasendulo - wonke umuntu azitholele okuthile okuthakazelisayo. Futhi ngenxa yokuthi baningi abafisa ukuvakashela, futhi ihhotela Zhukovsky njalo ziphoqa, kuyinto efiselekayo banakekele ukubhuka kusengaphambili. Umuzi ine amahhotela e ezahlukene izigaba intengo wayesenikeza ukwaziswa ngezansi kuzokusiza ukubhekana lapho engcono ukuhlala.
Lokho okubizwa ngokuthi i efulethini abavamile, ibe amatende esikhashana izivakashi. Umuzi ine eziningi amahhotela afanayo efulethini hlobo. Omunye wabo - efulethini "Ngo Zhukovskiy", esisogwini ul. Chkalov inombolo 33 kv.№ 70. Eziduduzayo kwakubenza bazizwe benethezekile - lawa izinzuzo main of ezikhungweni ezinjalo. Akekho ekukhathaza uyaphumula, musa wafiphaza izisebenzi ehhotela ungagxambukeli omakhelwane ngenani. Kuyini esibalulekile kwabaningi, ikakhulukazi kulabo efika e Zhukovsky ngezebhizinisi, ekhishini has konke okudingayo ukuze ukupheka, kuhlanganise kuhovini Umshini wokuwasha izitsha. Check-in bese uhlole-out - at 7 am. Labo abaye bahlala lapha izikhathi eziningi, ukuthi yonke indawo ehlanzekile sihlanza nelineni zihlanzekile kahle futhi ironed, amathawula njalo kuyatholakala.
Ukuze enkabeni yedolobha - mayelana 900 amamitha, iseduze City Museum, Deca-Sun, Nethempeli Cosmas futhi Damian.
Vele lemizuzu 15-20 kusukela enkabeni yedolobha, emgwaqeni. Nizhny Novgorod inombolo 4B elise ehhotela "Pendant". Zhukovsky - wedolobhakazi ayibalulekile ezincane: ihlanganisa indawo engaba ngu-50 amakhilomitha square Indawo eduze isikhungo ikuvumela ukuba uthole ngokushesha kunoma iphuzu emzini othile, kuba lula ukuya ezikhangayo oyifunayo, ngakho ngesikhathi "elengayo" ukutholakala uhlale encane. Ukuthandwa lula yokuthi ungakwazi uhlala ndawonye nomuntu ezifuywayo. Naphezu kwesibalo elincane amakamelo (zikhona 14), umshado uye konke okudingayo for a holiday:
Ngezikhathi zakusihlwa kukhona izinhlelo ezikhethekile ukuzijabulisa.
Siza diversify club ezokungcebeleka eseduze Indawo yokudlela "NEW NEO" (300 m), esitolo "Othembekile" (300m), CFU 'Lime' (10m), esitolo "Navigator" (700 m).
Indawo yokudlela wavulwa nje 3 iminyaka edlule, kodwa iye yazuza kakade ukuqashelwa phakathi kwalabo ivamile Zhukovsky. Kutholwe ehhotela "Graf Ihhotela" emgwaqeni. Queen, №4, Ukwakha 2. ukuhamba ibanga - ". Eliya 'yedolobha, UM Centre Avia 22 Aero-Hydrodynamic Institute, sesitimela Nakuba ilungiselelo ikamelo elincane (11 kuphela), kukhona kokubili amakamelo ejwayelekile futhi "Lux". Amakhasimende bazokwazi vakashela:
Jacuzzi / umgqomo ashisayo.
Konke lokhu iyatholakala kwamakhasimende eza ehhotela. Ngo ukubuyekeza amaklayenti wangaphambili kugcizelela ukuthi ihhotela kwenziwa njalo abasebenzi usuku yokuhlanza njalo uya phambili futhi ukulungele ukunikeza noma yiluphi usizo uma kudingekile. Kusukela ehhotela Zhukovsky, kuhlanganise "Graf Ihhotela" ayikuvumeli ukubhema ensimini yabo, ukubhema izivakashi bathi ayisheshi, njengoba kufakazelwa endaweni emisiwe ukubhema.
Igumbi ngalinye has yokugezela yayo siqu, air conditioning, Ukushisa imisebenzi. Ukuze izivakashi uphumule futhi ungaphazamisi omakhelwane, ngesikhathi ongakasetshenzwa soundproofing kakhulu.
Lesi sikhungo iseduze emgwaqweni omkhulu olunothile zikaphayini epaki at Tupolev onguthelawayeka, 1. Lapha, izivakashi nethuba ukwenza imisebenzi yangaphandle - skiing, okujikeleza izintaba. Kukhethwa incike isikhathi sonyaka kanye sezulu. Phakathi izindawo zokungcebeleka - khona zasendlini imitha-25 yokubhukuda bese sauna. Ngaphezu kwalokho, ihhotela inikeza bukhoma ukuzijabulisa, Karaoke, amabhiliyade, lounge. Nakuba ehhotela "ULina" akuyona enkulu kakhulu, amasevisi ahlinzekwa lapha njengoba kunoma yiliphi ihhotela ezinkulu. Igumbi ngalinye has:
okugeza siqu zonke zokugeza, kuhlanganise hairdryer.
Uma sikhuluma ehhotela Zhukovsky, umuntu akakwazi kodwa khumbula ehhotela "Europe". It kungokwalabo izikhungo ibhizinisi-class. abasebenzi kamnandi abafanelekayo, ifakwe zonke izinombolo ezidingekayo, wawanika ukudla okumnandi futhi isimo esihle - konke lokhu kwenza ehhotela izivakashi zayo. Ngo abantu abangaphezu kuka-60 kungaba kanyekanye ihlanganise ihholo inkomfa banzi kanjalo lapha Kwenziwa imisebenzi ehlukahlukene, kuhlanganise nemihlangano ibhizinisi, izingqungquthela, trainings, izingqungquthela. Kubahlanganyeli bakwazi ukuphumula nokuqabuleka, yokudlela isikhungo uhlongoza ukuhlela lezitsha ukukhanya noma ikhefu siphuze ikhofi ngesikhathi sekhefu. Ihhotela itholakala enkabeni yedolobha emgwaqeni. Zhukovskogo, № 2.
"I-Europe" ehhotela, ngaphandle-hotel "Ubungane" - lena hhotela engcono Zhukovsky. It is ezishiwo Izibuyekezo eziningi kumawebhusayithi kwezikhungo. Ihhotela "Druzhba" lakhiwa iminyaka engaphezu kwengu-60 edlule futhi, kodwa emva ukwakhiwa kabusha kulo nyaka sihlangabezane kabusha.
Manje mina ngime lapha, iningi labo, weza emzini ukuxazulula ezindabeni zebhizinisi noma umane uphumule. Lokhu kuyabasiza kubenze hhayi kuphela induduzo kwakubenza bazizwe benethezekile izikhungo, kodwa futhi indawo yayo - kuba kwi Boulevard eyinhloko yomuzi omdala. Le ndawo libhekene ingqalasizinda ekhona futhi iyatholakala, okuyinto ekahle kakhulu ngazo zonke izindlela.
Ngaphandle indinganiso nezinye izikhungo zinsiza zinikelwe:
Isidlo sasekuseni samahhala.
Ukuhlela izinto zokuhamba ukuze sezindiza yenhloko-dolobha.
Uhambo zonke izinto eMoscow.
Manje uyazi konke mayelana ehhotela Zhukovsky.